Cuntada Chrysoberyl - HDSM - Bagdasarov - kobcinta kobcinta - video
Chrysoberyl isku habboon - HDSM
Tags chrysoberyl, HDSM, Senttetik
Chrysoberyl isku habboon
Iibso dukaanno dhagaxyo dabiici ah dukaankeena
Chrysoberyl macdanta ama dhagaxa dhagaxa ah waa aluminate of beryllium leh qaabka BeAl2O4. Magaca chrysoberyl wuxuu ka yimaadaa erayada Giriigga ee chrysos iyo beryllos. Macnaha "macaan dahab cadaan ah". Inkasta oo ay isku mid yihiin magacyadooda, chrysoberyl iyo beryl waa laba muraayad oo kala duwan. Inkastoo ay labaduba ku jiraan beryllium. Chrysoberyl waa ta saddexaad ee ugu adkaanta dhirta dabiiciga ah. Oo been ka sheega 8.5 miisaanka miisaanka miisaanka macdanta.
Chrysoberyl caadiga ah waa huruud ah-cagaaran oo hufan si tartiib tartiib ah. Marka macdanku muujiyo cagaar cagaaran oo cagaar ah oo cagaar ah oo muuqaal ah, markaa waxay tixgelineysaa sida tayada qurxinta. Saddexda nooc ee ugu muhiimsan ee chrysoberyl waa: caleemaha jaalaha ah-cagaarka-cagaarka ah, indhaha bisada ama cymophane, iyo alexandrite. Chrysoberyl-cagaar-cagaar ayaa loo yaqaan "chrysolite" inta lagu guda jiro xilliyadii Victorian iyo Edwardian. Taas oo keentay jahawareer tan iyo magacaas ayaa sidoo kale loo isticmaali jiray peridot macdanta sida dhagax. Magacaas looma isticmaali karo magaca mira dhaladka.
Isbedelka Bagdasarov (HDSM)
Chrysoberyl isku dardaaran ah "Qaabka toosan ee jihada adkeynta" ee uu abuuray Kh.S.Bagdasarov sanadkii 1964 waxay ahayd fikrad cusub oo xagjir ah oo ku saabsan koritaanka kristal hal kali ah oo ku saleysan ku dhaqaaqida jiidaha sheyga ceyriinka ah iyo iniin kris kali ah jihada safka hore. Qaabkan waxaa loo sameeyay koritaanka cabirka weyn, Nd doped, kirismaska ​​laser-ka altuminium-aluminium oo aad u sareeya. Waxay u rogtay inay wax ku ool u tahay koritaanka dhagaxa sidoo kale abuurista kiristaalo leh aagagga dusha aan hore loo arag. Isticmaalka arrimaha habka 'HDS' ee isku-darka ee isku-darka waaweyn iyo gaar ahaan waaweyn ee qaabka-muraayadaha leucosapphire ah oo keli ah ayaa la xaliyay.
Habka korantada ee loo yaqaan 'chrysoberyl HDS' habka kobcinta wuxuu ka kooban yahay habka soosocda
Nooc (oo leh wax kasta oo u baahan istuudiyaha) ayaa lagu rakibay weelka hore ee weelka kaas oo u ekaa badmaaxe meel bannaan.
Waxyaabaha dhagxiga ah ee qashinka waxaa la dhigayaa weelka.
Weelka waxaa lagu dhejiyaa foorno.
Hawlaha kobcinta waxaa lagu sameeyaa jawi caafimaad ama dabiicado ah.
Inta lagu gudajiro geedi socodka kobcinta iyadoo la adeegsanayo kamarad ku taal dabka sare ee foornada, geedi socodka waa la raacayaa oo la helaa inta lagu jiro muddada buuxda ee geedi socodka koritaanka.
Kaadida ayaa markaa si tartiib ah loo qaboojiyaa.
Habkani wuxuu suurtogal u yahay in la helo dalab ballaadhan oo leh geeso ku dhawaad ​​iyo jihayn kasta oo loo yaqaan "C-plane, M-plane, R-plane or A-plane.
Dhagxannada chrysoberyl Bagdasarov waxay leedahay tayo sare oo indhaha ah waxayna ku habboon tahay codsiyada indhaha, farsamada, RF iyo LED.
Habka HDSM ayaa u oggolaanaya in uu sameeyo kareebeyn soo noqnoqon leh haddii ay dhacdo marka la nadiifiyo kiimikada dheeraad ah ee alaabta ceeriin loo baahan yahay. Waxa kale oo suurtogal ah in la fuliyo geedi socodka kicinta ee joogtada ah ee lagu soo wareejiyay qaabka loo yaqaan "elegant" oo loo yaqaan "crechible echelon" iyada oo loo marayo aaladda "crystallization". Iyadoo la ogaanayo qaabka HDSM waxaa farsamo ahaan fududahay in la abuuro jawi heerkulka xukunka ah oo aad muhiim u ah kobcinta qulqulatada weyn ee keli ah. Habkani wuxuu suurtogal u yahay in la helo dhejiyo ballaaran oo leh geeso ku dhawaad ​​dhamaystiran iyo jiheyn kasta oo shucaac ah.
Chestnoberyl Synthetic - HDSM
Caanaha kimikalka: BeAl2O4: Cr3 +
Nidaamka Crystal: Rhombic
Qalabka (Mohs): 8.5
Ka-saarisyada: Ka baxsan bilaashka ah. (kala-guurka furaha ah ee ka yimaada chrysoberyl dabiiciga ah: soodhada, dildilaaca, godadka, jaranjarada multi-phase, quartz, biotite, fluorite)
Tags hydrothermal, Quartz, Senttetik
Tags Morganite, Senttetik
Tags Aquamarine, Senttetik
Beryl gaduudan oo casaan ah
Tags Beryl, cas, Senttetik